DHEGEYSO-Xiisado siyaasadeed oo ka taagan magaalada Buuhoodle. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Xiisado siyaasadeed oo ka taagan magaalada Buuhoodle.
Agoosto 8, 2016 4:22 b 0
Buuhoodle, Aug 08 2016–Xubno katirsan maamulka Khaatumo oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Buuhoodle waxay si adag ugaga horyimaadeen hogaamiyaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galayr oo dhowaan wada hadal la furay Somaliland.
Xubnahaani shirka jaraa’id qabtay ayaa waxa ay sheegeen inaysna marnaba aqbali doonin gobolka Cayn iyo guud ahaan deegaamada Sool iyo Cayn gorgortan lagala galo maamulka Soomaaliland.
Shirkaani jaraa’id ayaa kusoo beegmaya xilli hogaamiyaha Khaatumo Cali Khaliif Gallaydh uu shir jaraa’id dhankiisa qabtay kagana hadlay wadahadalada uu kula jiro Soomaaliland, isagoona sheegay inay dani ugu jirto dadka gobolka.
DHEGEYSO-Galmudug oo ka hortimid ciidamada DANAB ee lageeyey Galkacyo.